Mazino Egarwe | NdiMwari Akasika Here?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Marathi Myanmar Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
GARWE imhuka ine mazino ane simba kudarika dzimwe mhuka dzose. Somuenzaniso, kuAustralia kune mamwe makarwe okuti simba rine mazino emhuka yakadai seshumba rinopetwa katatu kuti rienzane neremakarwe iwayo. Mazino egarwe ane simba uye anogona kunzwa chero chinhu chidiki-diki chinenge chaagumha. Asi izvozvo zvinoitika sei iro garwe riine ganda rakakwasharara?
Mumuromo megarwe mune tutsinga twakawanda tunoribatsira kuziva chinhu chinenge chapindamo. Mumwe muongorori anonzi Duncan Leitch akati: “Tutsinga utwu tunobuda nomumaburi ari mudehenya.” Izvi zvinoita kuti tutsinga utwu tusakuvadzwa uye zvinoita kuti garwe rinzwe zvinhu zvidiki-diki zvinenge zvapinda mumuromo. Zvarinoita izvi hazvikwanisi kuitwa nemichina. Garwe rinogona kuziva kuti zvinhu zvinenge zvapinda mumuromo maro chikafu here kana kuti marara. Ndizvowo zvinoribatsira pakutakura vana varo mumuromo risingavakuvadzi. Chinoshamisa pamazino aro ndechekuti ane simba uye anogona kunzwa chinhu chidiki-diki chinenge chaagumha.
Unofungei? Garwe rakangoerekana ravapo here kana kuti rakasikwa naMwari?
Zvikonzero 2 zvinoratidza kuti nyaya yokuti vanhu vakabva kumhuka ndeyenhema.